यसकारण साउन महिनामा भुलेर पनि खानु हुदैन माछामासु ! – Life Nepali
यसकारण साउन महिनामा भुलेर पनि खानु हुदैन माछामासु !
आखिर मान्छेहरु किन साउन महिनामा रक्सि र मासु खादैनन् त ? यसको धार्मिक र वैज्ञानिक कारणका बारेमा हामी यहाँ चर्चा गर्दैछौं । धार्मिक कारण : यसै पनि हिन्दू धर्ममा मद्यपान र मांसाहारलाई राम्रो दृष्टिले हेरिन्न । त्यसैपनि साउन जस्तो पवित्र महिनामा त यिनीहरूको सेवन वर्जित नै छ । शिवशक्तिको
जीवह’त्या गर्नु यसै पनि पा’प हो र पवित्र साउन महिनामा यो पा’प बोक्नु अनुचित छ । यो महिना पशुहरूको प्रजननको समय हो र ग’र्भावस्थामा रहेको पशुको ह’त्या गरेर निकालिएको मासु खाएर पा’पको भागिदार हुनु हुँदैन ।
रक्सी त जुनसुकै बेलामा पनि पिएको नराम्रै हो । स्वास्थ्यलाई नराम्रो असर गर्छ यसले । साउनमा पनि किन र’क्सी पिउनु त ? अनि मासुको कुरा गर्दा साउनमा बादल लागेर हाम्रो शरीरले सूर्यको प्रकाश राम्ररी पाउँदैन ।
यसले गर्दा हाम्रो पाचनशक्ति क’मजोर हुन्छ र मासु जस्तो छिट्टै न’पच्ने कुरा लिँदा स्वास्थ्यसम्बन्धी अनेकौं स’मस्या आ’इलाग्छन् । बर्खाको मौसममा पशुहरूलाई अनेकौं किसिमका संक्रामक रोग लाग्छन् र त्यस्ता रो’गी पशुको मासु खाँदा रो’ग सर्छ । एजेन्सी
Previous सोमबार दिनमा भगवान शिवजी”को नाममा व्रत बस्ने चलन कसरी सुरु भयो ?
Next भोलेनाथको दर्शन गरि २०७७ साउन १३ गते मंगलबारको राशिफल हेर्नुहोस !